ဘုန်းကြီးအုပ်​ချုပ်​တဲ့တိုင်းပြည်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဘုန်းကြီးအုပ်​ချုပ်​တဲ့တိုင်းပြည်​
Posted by naywoon ni on Sep 24, 2015 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 16 comments
ကျုပ်​ ဒီလို​ပြောလိုက်​လို့ ခင်​ဗျားတို့စိတ်​ဆိုးမလား ? ဆိုးချင်​ရင်​လည်း ဆိုး​ပေါ့ဗျာ ။ ဆဲချင်​သပါ့ ဆိုလည်း ပြိုင်​ပြီး ဆဲဖို့ အဆင်​သင့်​ပဲ ။ ကျုပ်​က ကျုပ်​စိတ်​ထဲမှာ မှန်​ပြီလို့ယူဆထားတဲ့ ကိစ္စ ဆို ဘာနဲ့လာထားတား ​ပြောကို​ပြောရမှ ။ ဒီအ​ကြောင်းကို ကျုပ်​က ​ပြောချင်​​နေတာကြာပြီ ။ ခု​တော့ အဲ့ အ​ကြောင်း​ပြောပြီဗျာ ။ မကြားချင်​ မဖတ်​ချင်​လည်း ​ကျော်​သွား ။
ဟုတ်​တယ်​ဗျာ ။ ကျုပ်​တို့တိုင်းပြည်​ရဲ့ သမိုင်း​ကြောင်း ပြန်​ကြည့်​ ။ ရှင်​ဘုရင်​​တွေက မင်းလုပ်​ အုပ်​ချုပ်​တယ်​သာ ​ပြောတာ ။ တိုင်းပြည်​အတွက်​ ဘာများ အဖတ်​တင်​​အောင်​လုပ်​​ပေးသွားကြလို့လဲ ။ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး ဟုတ်​ဟုတ်​ငြားငြား အားကြိုးမာန်​တက်​ လုပ်​​ပေးသွားတဲ့ ရှင်​ဘုရင်​ ရှိခဲ့ဘူးလို့လား
ကျုပ်​တို့ပြည်​သူ​တွေမှာ သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​လုံး ဘယ်​သူ​တွေနဲ့ လက်​ပွန်းတစ်​တီး​နေခဲ့ ပြီး အားကိုးခဲ့ကြရလဲ။ ပြန်​စဉ်းစားကြည့်​ ။ သာသနာ့ ၀န်​ထမ်းလို့​ခေါ်တဲ့ ရွာဦး​ကျောင်းက ဘုန်းကြီး​တွေဗျ ။ သက်​ဦးဆံပိုင်​ဘုရင်​​ခေတ်​တစ်​​လျှောက်​လုံး ဘုန်းတော်​ကြီး​ကျောင်း ပညာ​ရေးနဲ့ နှစ်​ပါးသွားခဲ့ကြတာ ။ အဲ့​တော့ သာသနာ့ ၀န်​ထမ်း အပြင်​ ပညာ​ရေး ၀န်​ထမ်းအဖြစ်​ပါ တာဝန်​​ကျေခဲ့ကြတာ ။ ဒါတင်​ပဲလား ။ ဘယ်​ဟုတ်​ဦးမလဲ ။ ကျန်းမာ​ရေးကိစ္စ ။ ဘယ်​ရှင်​ဘုရင်​ကများ ဗိ​န္တော ​ကျောင်းဖွင့်​ပြီး သင်​တန်းဆင်းလက်​မှတ်​​ပေးခဲ့လို့လဲ ။ ဘုန်း​တော်​ကြီး​တွေပဲ ဟိုက ဒီက ကျမ်းစာအုပ်​​တွေဖတ်​ပြီး ​ဆေးမြီးတို​တွေ ​ဆေးမြီးရှည်​​တွေနဲ့ ကုသ​ပေးခဲ့ရတာ ။ အံမာ ပ​ယောဂ လည်းကုတဲ့ ဘုန်​ကြီး​တွေရှိသလို ပီယ​ဆေး ​ပေး အင်းအိုင်​လက်​ဖွဲ့ ဆိုလည်း ကျွမ်းကျင်​အဆင့်​​ပေါ့ ။ ရှင်​ဘုရင်​ဆိုတာက ရစရာရှိ တဲ့ အခွန်​​ကောက်​ပြီး မိုးရွာတာ​တောင်​ သူ့ဘုန်းကံ ​ကြောင့်​ ရွာပါတယ်​​ပြောမှ ကြိုက်​တဲ့လူစား ။ ​တောရွာ​တွေမှာ ကျွဲ​ပျောက်​နွား​ပျောက်​ ဘယ်​တိုင်​စရာ ရဲစခန်းရှိခဲ့ လို့လဲ ။ ဘုန်​ကြီး​တွေပဲ သူရဇ္ဇ စန္ဒ​ရော ​သောကြ ဘာညာသရကာ တိုင်​ထူပြီး ဘယ်​အရပ်​မှာ သွားရှာကြည့်​ ဆိုပြီး တွက်​ချက်​​ပေးလိုက်​ကြရတာပဲမို့လား ။ အဲ့ဒိ​တော့ ဘုန်​ကြီး​တွေက ပြည်​သူ​တွေအ​ပေါ်မှာ သြဇာ ​ညောင်းခဲ့တယ်​ ။ ​တောရွာ​တွေမှာဆိုရင်​ သူကြီး​တောင်​​ခေါ်ပြီး ကြိမ်​ဒဏ်​ ​ပေးခဲ့တာ ။ ရွာဦး​ကျောင်း ဘုန်​ကြီးဆို ​စောဒက မတက်​ရဲ ရှာဘူး ။ ဘုရားပွဲ​တွေ ဘာ​တွေဆိုလည်း ရဲ​တွေ မီးသတ်​​တွေ မလိုပါဘူး ။ ​ကျောင်းက ကိုယ်​​တော်​​တွေ သင်္ကန်း​ရောင်​ပြလိုက်​ရင်​ မီးကို​သေလို့ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်​နှစ်​ဆယ်​​လောက်​ကအထိ ​တောရွာ​တွေမှာ ဘုန်းကြီး​တွေ ပွဲထိန်းတာဝန်​ယူထားရတုန်း ။ ရဲနဲ့ မီးသတ်​ ထိန်းမရရင်​ ဘုန်​ကြီး​တွေ ​ခေါ်ပြီးထိန်းခိုင်းရတုန်း ။ ဒါက ဘာကိုပြတာလည်း ဆို​တော့ အုပ်​ချုပ်​တဲ့ ရှင်​ဘုရင်​​တွေက အခွန်​​ကောက်​တာကလွဲပြီး ဘာတာဝန်​မှမယူခဲ့လို့ သမိုင်း​ပေးအ​ခြေအ​နေအရ ပြည်​သူ​တွေကို​ရှေ့ကထွက်​ပြီး ဦး​ဆောင်​ဦးရွက်​ပြုခဲ့တာ ။ ရှင်းတယ်​​နော်​ ။
ခုလက်​ရှိအ​ခြေအ​နေမှာ အစိုးရ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ​ရှေး​ခေတ်​က ရှင်​ဘုရင်​​တွေလိုပဲ တာဝန်​မဲ့ ​နေပြီး တိုင်းပြည်​ရဲ့ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး လူတစ်​​ယောက်​ချင်းစီရဲ့ လုံခြုံ​ရေး စတာ​တွေကို တာဝန်​ယူမ​ပေးနိုင်​ဘူးဆိုရင်​ ……………
တိုင်းပြည်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေး ယန္တယား​ပေါ် ​ရောက်​ရှိ​နေပြီး ​ရောက်​လာလတ္တံ​သော လူကြီးမင်းများက ခိုင်​မာတဲ့ ဥပ​ဒေ ​တွေပြဌာန်းပြီး ​ကျောသားရင်​သားမခွဲခြားပဲ မအုပ်​ချုပ်​တတ်​ဘူးဆိုရင်​ ။ တာဝန်​ယူမှု တာဝန်​သိမှု နဲ့ ကင်းလွတ်​ပြီး ငါတ​ကော​ကော​နေကြဦးမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ ခင်​ဗျားတို့လည်း လွှတ်​​တော်​ကြီးထဲ အိပ်​ငိုက်​ရတာ ပင်​ပမ်းပါတယ်​ ။ ပင်​ကိုယ်​စိတ်​ထဲက မပါပဲ လူအထင်​ကြီး​အောင်​​နေရတဲ့ ကိစ္စ ​အောင့်​အီးပြီး လုပ်​ပြမ​နေကြပါနဲ့ ။ ခင်​ဗျားတို့ အစား ကျုပ်​တို့ ဘုန်းကြီး​တွေကိုပဲ အုပ်​ချုပ်​ခိုင်းလိုက်​​တော့မယ်​ ။ ဒါကမှ တိုင်းပြည်​ အတွက်​ တစ်​စုံတစ်​ရာ ရ​ကောင်း ရနိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​ ။
ရွဲ့ပြောသလား၊ တကယ်ပြောသလား။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ lol:-)))
အဲလို.. လွန်ခဲ့တဲ့.. အနှစ် ၅၀၀ကျော်… ဥရောပမှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်..
ရွဲ့​ပြောတာ အရီး ​ရေ
အင်း​ပေါ့​လေ အတည်​အခန့်​​တွေ​ရေး​နေကြဆို​တော့လည်း ​မေးယူရ​အောင်​ဖြစ်​​နေပြီ ။ ( ကွကိုမှ အဲ့သလိုမ​ပြောရင်​​ပြောမဲ့သူမရှိလို့
စစ်ထဲ ဝင်ပါ လို့ ပြောဖို့ ခေတ်ကုန်ပြီ..
ဘုန်းကြီးးဝတ်ပြီး မဘသ ထဲ ဝင်ပါ ..
အစိုးရ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က ​ရှေး​ခေတ်​က ရှင်​ဘုရင်​​တွေလိုပဲ တာဝန်​မဲ့ ​နေပြီး တိုင်းပြည်​ရဲ့ ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး လူတစ်​​ယောက်​ချင်းစီရဲ့ လုံခြုံ​ရေး စတာ​တွေကို တာဝန်​ယူမ​ပေးနိုင်​ဘူးဆိုရင်​ ……………
တိုင်းပြည်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေး ယန္တယား​ပေါ် ​ရောက်​ရှိ​နေပြီး ​ရောက်​လာလတ္တံ​သော လူကြီးမင်းများက ခိုင်​မာတဲ့ ဥပ​ဒေ ​တွေပြဌာန်းပြီး ​ကျောသားရင်​သားမခွဲခြားပဲ မအုပ်​ချုပ်​တတ်​ဘူးဆိုရင်​ ။ တာဝန်​ယူမှု တာဝန်​သိမှု နဲ့ ကင်းလွတ်​ပြီး ငါတ​ကော​ကော​နေကြဦးမယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​ …..
ကဲ.. အခု ဥပဒေတွေတော့ ထုတ်လိုက်ပါပြီ… ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ တိုင်ချင်ရင် တရားရေးရာကိုပဲ တိုင်ရမှာမို့လား.. တရားရေးရာကရော ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးမတဲ့လား… အရင်လိုပဲ အဂလိလိုက်စား.. လာဘ်ယူပြီး လျစ်လျူရှုထားရင် မဘသ ကို တိုင်ရမှာလား.. မဘသ က ထောင် (၇) နှစ်ဆိုတာကို တန်းချပေးမှာလား.. ဒီခေတ်ထဲမှာက သိတဲ့အတိုင်း ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်ရင် ပိုက်ဆံက သောက်သောက်လဲ ကုန်တာ… ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ တရားစွဲလို့ရပြီလား.. ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ တရားရင်ဆိုင်လို့ ရပြီလား… ရှေ့နေငှားခက လွဲလို့ ဘာတစ်ခုမှ ထပ်မကုန်ဘဲ တရားရင်ဆိုင်လို့ ရပြီဆိုရင် အဲဒီဥပဒေတွေရော … အဲဒီ မဘသ ကိုရော .. အဲဒီ ပါတီတွေကိုရော အကုန်ထောက်ခံပစ်လိုက်မယ်..
ဟိုးးအရင်ခေတ်တွေက ဘုန်းကြီးတွေ အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ အစစ်အမှန်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်လို့ရတာလေ ..
ခုခေတ်မှာ အတုအယောင်တွေက များပါဘိသနဲ့ …
ကျားကြောက်လို့ ရှဉ့်ကြီးကိုးးးး ရှဉ့် ကြီး ကျားထက်ဆိုးနေပါ့မယ်ဗျာ …
ဟို အရင်​​ခေတ်​တုန်းကလည်း လူ​တွေရဲ့ လိုအပ်​ချက်​​တွေ လိုက်​လုပ်​ရင်းနဲ့ ဘုရား​ဟော နဲ့​သွေဖယ်​​နေခဲ့တာ ထည့်​မတွက်​​တော့ဘူးလား ။ မင်းတုန်းမင်း​ခေတ်​က ပြည်​သူ​တွေ ဒီမိုက​ရေစီ​တောင်းခဲ့ရင်​​တောင်​ မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ဘုန်​ကြီး​တွေ ခုလက်​ရှိအ​ခြေအ​နေအတိုင်း လုံး​ထွေးမ​နေဘူးလို့ ​ပြောနိုင်​ပါ့မလား ။
တခြားမကျိနဲ့ … ဟင့်အင်းဘုန်းကြီး ဆိုတဲ့ စကားရပ်မရှိ တင်ပါ့ဘုရားပဲ ရှိတာသာကျိ….
ကျုပ်အင်မတန်ချဉ်တဲ့ တော်ကီတခုရှိသေးတယ်…. ဘာတဲ့ …ဆရာတော်ဘုရားကြီး တဲ့ …
ဆရာတော်ဖြင့် ဆရာတော်ပေါ့ဗျာ … ဘယ်က ဘုရားကြီးက ကပ်ပါသာတုံး…
ဘုရားထက်ကြီး လို့လား …မေးရမယ့်ပုံ…
အင့်လေ ကြီးချင်လည်း ကြီးမပေါ့…
ဘုရားတော် သူရို့ အနေကဇာတင်မှ လူရှိခိုး ခံရရှာတာ…
အဲ့လိုနဲ့ တိုင်းပြည်လည်း ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပီ…..
စကားလုံးတွေတင်.. အပေါ်စီးယူထားယုံမက.. လက်တွေ့ဆက်ဆံမှု.. လူမူရေးဆက်ဆံမှုအပြုအမူလည်း… အပေါ်စီးယူသဗျ..။
ဒါနဲ့..တိုင်းပြည်မွဲသွားယုံတင်မဟုတ်.. လူမျိုးပါမျိုးကန်း..။ သာသနာလည်းပျက်..။
ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့.. ပုပ်ရဟန်းမင်း.. ဒီနေ့.. အမေရိကားတခွင်လှည့်နေတာမှာ.. သူ့အကြောင်းပြရင်း.. တွေ့လိုက်တာလေးတခု…
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့..ရဟန်းတွေကို.. လှည့်လည်တောင်းစားခိုင်းလိုက်တာမှာ..လှူသူကိုလေးစားသမှုအနေနဲ့.. ဖိနပ်တောင်မစီးခိုင်း..။
ဂျီးဇက်ခရိုက်စ်က.. ဗုဒ္ဓနောက် နှစ်၆၀၀လောက်နောက်ကျပွင့်တာ..။
သေချာတာကတော့ ..ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး ဘာသာတရပ်ဖြစ်သွားတာပါပဲ..။
Pope Francis washes feet of prisoners, baby for Holy Week …
Apr 4, 2015 – Pope Francis washed the feet of 12 inmates andababy at Rome’s main prison Thursday inapre-Easter ritual meant to show his willingness to .
Pyae Htoon says:
ခုနောက်ပိုင်း ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးမဆုံမိအောင်နေမိလေ့ရှိတယ်။ စကားအသုံးအနှုန်းကိုဘ၀င်မကျတာကြောင့်ရယ်၊ နောက်ပိုင်းဖတ်မိတယ့် အခုလိုမျိုးစာတွေကြောင့် စဉ်းစာကြည့်မိပြီး သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့တာပါ။ အထူးသဖြင့် ဦးဝီရသူ ပြောတဲ့ဟာတွေ တချို့ကြည့်မိပါတယ်။ တော်တော်လေးဆိုးပြီး တော်တော်လေးမုန်းမိပါတယ်။
အရှိကို အရှိအတိုင်း မြန်တျန့်သာသနာကို မြင်ရတာပါပဲ။ သဂျီးပေါဒဲ့ အစိမ်းဝတ် အဝါဝတ်တွေ .. ။ အနည်းဆုံးတော့ တိုင်းပြည်ကိုဆွဲခြတာ တမျိုးထဲ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားတာပေါ့..
.အားလုံးရဲ့ အဓိကက ဘာသာရေး(ဘယ်ဘာသာကိုမဆို၊ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအ၀င်)ကို
.လူ့ကိစ္စတွေရဲ့ ရှေ့တန်းကတစ်စတစ်စဖယ်ပြီး ဒုတိယတန်းကိုပို့ရမယ်…
.အဲဒီတော့မှ လူဟာ ဘာသာရေးအရိပ်မှ လွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရပြီး
.လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကလဲ ဘာသာရေးမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး မလျှော်မကန်လုပ်ဆောင်မှု့တွေကကင်းသွားမယ်..။
.အဲသည်နည်းနဲ့ ဘာသာရေးကို နောက်တန်းပို့နိုင်ရင်-
.လူလဲ သိက္ခာရှိလာမယ်၊ ဘာသာရေးလဲ သိက္ခာရှိလာမယ်။ လူ့ဝန်းကျင်လဲ မှန်ကန်မျှတလာမယ်…။
အစိမ်း၁ + ဗျို့…
ဒီလောက်ဘာသာရေးက..ကမောက်ကမလုပ်ပြနေတာတောင်.. စစ်တပ်က.. ကိုင်လုပ်နေတာပါလို့.. ထင်သူတွေကရှိသေး…။
အနော်ရထာ.. စခဲ့တဲ့.. နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ…။